Faarax Macallin oo dacwad ka gudbiyay Aadan Barre Ducaale | Entertainment and News Site
Home » News » Faarax Macallin oo dacwad ka gudbiyay Aadan Barre Ducaale
Faarax Macallin oo dacwad ka gudbiyay Aadan Barre Ducaale
daajis.com:- Guddoomiye ku xigeenkii hore ee Baarlamaanka Dalka Kenya Faarax Macallin ayaa dacwad rasmi ah u gudbiyay Maxkadda sare ee Dalka Kenya taas oo uu ku doonayo in Maxkamadda ku laasho natiijada Kursiga Gaarisa ee uu dhawaan ku guuleystay Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya.
Faarax Macallin ayaa Maxkamadda ka codsaday in muddo 48 Saacadood ah amarto baabi’inta natiijadaas sidoo kalena ay Guddiga doorashada amraan in dib loogu laabto sidoo kalena la diiwana geliyo Sanaadiiqdii codbixinta ee ka dhacday Gaarisa.
Faarax,waxaa uu sheegay in natiijada ay shaaciyeen Guddiga doorashada Kenya ee doorashadii dhacday 8 ddii August ay ahayd been abuur islamarkaana ay doorashada ahayd mid ku shubasho ah.
Maxkamadda sare ee Dalka Kenya ayaa 1dii bishan laashay natiijada doorashadii la shaaciyay in uu ku guuleystay Huru Kenyatta waxaana Maxkamadda sare ee Kenya amartay in doorashadaas dib loogu laabto.
Guddiga doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in doorashada ku celiska ah kaliya ay ka qeyb geli doonaan Madaxweynaha hadda haya iyo Raila Odinga oo kaliya,taas oo ka dhigan in doorashada oo dhan aan lagu laaban doonin.
Faarax Macallin ayaa doonaya in Kursiga Gaarisa ee ay isaga iyo Aadan Barre ku tartameen lagu celiyo si uu mar kale u tijaabiyo codbixinta Dadka Gaarisa.